प्रायद्वीपमा शान्ति छाएकै हो त ? | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
प्रायद्वीपमा शान्ति छाएकै हो त ?
२०७५ असार १, शुक्रबार ११:४३ गते
– डा. धनपति कोइराला
विश्व अहिले मुख्यतः पारमाणविक तथा रासायनिक अस्त्र, तापमानमा बढ्दो वृद्धि र शक्तिसम्पन्न राष्ट्र बन्ने दौडबाट प्रताडित रहेको छ । सिरिया द्वन्द्व, भारत–पाक द्वन्द्व, कतार–साउदी अरेविया द्वन्द्व, कोरियाली प्रायद्वीपीय द्वन्द्व मुख्य छन् । सँगसँगै, इराक र अफगानिस्तान पनि अझै शान्त बन्न सकिरहेका छैनन् । यदाकदा अफगानिस्तान द्वन्द्वको बाछिट्टा पाकिस्तानमा पर्ने गरेको छ । त्यसो त, आन्तरिक तनावबाट भारत, बर्मा, प्रायः अफ्रिकी महादेशीय मुलुकहरु, क्रोएसिया र केही एसियाली देशहरु पनि अछूतो रहेका देखिन्नन् ।
यस्तो द्वन्द्वको मुख्य कारक राजनीतिक नै देखिएको छ । यसमा घरेलु राजनीतिले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको स्वरुप ग्रहण गरी अहिले यसको दलदलमा फँसेर त्राण पनि पाउन नसकिने गरी फँसेको मुलुक हो सिरिया, जहाँ कैयौँ देशहरुका स्वार्थ जोडिएको छ । यो मुलुक अहिले शक्तिसम्पन्न राष्ट्रहरुका हतियार प्रदर्शनी केन्द्र बन्न पुगेको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन सायद । द्वन्द्वकै कारण लाखौँ बालबालिकादेखि युवायुवती र वृद्धवृद्धाहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । लाखौँलाख नागरिक युरोपतिर शरण खोज्दै भौँतारिइरहेका छन् । कैयौँ ज्यान जोगाउनकै लागि भाग्ने क्रममा डुंगा पल्टिएर बेपत्ता भएका छन् । कलियुगको कुरूक्षेत्र बनेको छ सिरिया अहिले । खासगरी, राष्ट्रपति बसर अल असदलाई सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित विपक्षी दलको विद्रोहलाई अमेरिकाले समर्थन गरेपछि स्थिति नियन्त्रणबाट बाहिर गएको देखिन्छ । अल असदलाई पनि रसियाले बलियो समर्थन गर्दै आएको छ । सिरियाकै भगौडा आर्मीका सैन्य युवाहरुले सरकारविरूद्ध जेहाद छेडिरहँदा त्यहाँ मुस्लिम अतिवादी संगठन (आईएस) पनि क्रियाशील बन्नपुगेको छ ।
प्राकृतिक ग्यास बेचेर धनी भइरहेको रसियाको आर्थिक स्रोत घटाउन र उसको सैन्यशक्तिलाई कमजोर तुल्याउन बसर अल असद सत्ताच्युत गर्नैपर्ने निष्कर्षसहित उनीहरु जुनकुनै मूल्य चुकाएर भए पनि त्यहाँबाट पछि हट्ने स्थितिमा देखिन्नन् । सिरिया प्रचुर पेट्रोलियम खानीका साथै अपार प्राकृतिक ग्यास खानी रहेको मुलुक हो । प्रायः अमेरिकालगायत युरोपियन मुलुकहरु अर्को त्यस्तै ग्यास भण्डार रहेको मुलुक रसियाबाट ग्यास खरिद गर्छन् । यो उनीहरुको बाध्यता हो । उनी सिरियाबाट सस्तैमा सम्भव भएसम्म पेट्रोलियम पदार्थसहित ग्यास दोहन गर्न चाहन्छन् । त्यसमा बाधक देखिएका छन्, वर्तमान राष्ट्रपति बसर अल असद । तिनलाई सत्ताच्युत गरी आप्mनो हितअनुकूलको नेतृत्व ल्याउन चाहन्छन् उनीहरु ।
रसियाको स्वार्थ छ यहाँ, त्यही ग्यास व्यापार घट्ने चिन्ता । अमेरिकालगायतका देशहरुले सिरियाबाट सित्तैमा ग्यास उपयोग गर्न पाए भने आप्mनो ग्यास बिक्री हुनछोड्ने र आप्mनो समृद्ध बन्ने सपना भताभुङ्ग हुने हुँदा जसरी पनि वर्तमान सत्तालाई टिकाइराख्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति । यसर्थ, यी शक्तिसम्पन्न मुलुकहरु सत्ताच्युत गराउने र सत्ता टिकाइराख्ने खेलमा क्रियाशील हुँदा सिरिया ध्वस्त बन्न गएको छ । यहाँ खासगरी अमेरिकीहरु र रसियाबीचको स्वार्थप्रेरित द्वन्द्वका कारण आज सिरिया कुरूक्षेत्र बन्नपुगेको छ । ठूला आडम्बरी साँढेका जुधाइमा बच्छाको मिचाइ भइरहेको स्थिति छ । अन्य विद्रोही विपक्षी दल, अतिवादी संगठनहरुले शान्ति स्थापना गर्न चाहेर पनि शान्ति र अमनचयन प्राप्त भइहाल्ने परिस्थिति देखिन्न यहाँ ।
कोरियाली प्रायद्वीपीय सङ्कटबाट त्राण
एउटै मुलुक टुक्रिएर दुईदेश बनेका उत्तर र दक्षिण कोरियाको शक्ति संघर्षले करिब दुई वर्षयता अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान केन्द्रित गरिरहेको थियो । खासगरी, उत्तर कोरियाले अमेरिकासम्म मार हान्नसक्ने ठूला पारमाणविक अस्त्रहरुको एकपछि अर्को गर्दै सफल परीक्षण गरेर । अहिलेसम्म अमेरिकालाई दिनदहाडै चुनौती दिइरहेथ्यो उसले । दुवै मुलुक एकअर्कालाई प्रहार गर्ने उत्कर्षमा थिए । उनीहरुको संरक्षक मुलुक अमेरिकालाई त ठाडै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा दक्षिण कोरिया, जापान आदि छिमेकी देशहरु त निरीह साबित भइरहेका थिए । उनीहरुको टीठलाग्दो अनुहार चीनतिर हेरिरहेथ्यो । कतै चीनले भन्दा हुन्छ कि भन्ने उनीहरुलाई लागिरहेथ्यो । चीनले पेट्रोलियम आपूर्तिमा कटौती गरेको घोषणा त ग¥यो तर आन्तरिकरुपमा आपूर्ति गरिरहेको खुलासा पनि भयो ।
यसै परिस्थितिबीच अचानक उत्तर कोरियाको रणनीतिले मोड लियो । संसार आश्चर्यमा प¥यो । पत्याउनै कठिन भइरहेथ्यो विश्वलाई । उसले त्यसबेला दक्षिण कोरियासँग मित्रताका लागि हात बढाइरहेथ्यो । जुन मुलुक आजन्म शत्रु थिए, तिनैबीच एउटा जो आणविक शक्तिका दृष्टिले सुसज्जित बनिसकेको थियो । उसले अर्कोलाई मित्रताको हात बढाइरहँदा अनेकौँ कुटिल चाल हुनसक्नेसम्मका आँकलन र अनुमानहरु ग्रिए । लगत्तै उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेताले चीन भ्रमण पनि गरे । यसलाई लिएर पनि धेरै अनपेक्षित टिप्पणीहरु भए । तर, दक्षिणले भने उसको मित्रताको हातलाई धेरै शंका गरिरहेन, बरू सावधानीपूर्वक लियो र आप्mनो पनि हात बढायो । फलतः दक्षिणमा भइरहेको खेलकुदमा भाग लिने अवसर प्रदान ग¥यो दक्षिणले । उत्तरले पनि भाग लिएपछि बिस्तारै मित्रताले मूर्तरुप लिएको अनुभूति गर्न थाल्यो विश्वले पनि । यसबीच, उत्तरले अमेरिकासँग कूटनीतिक हात बढायो र अमेरिकाले पनि यसमा आतुरता देखायो । फलतः विश्वको ध्यान खिच्दै जुन १२ अर्थात् जेठ २९ गते सिङ्गापुरमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनका बीच शिखर वार्ता सम्पन्न भएको छ । यसमा दुई देशबीच चारबँुदे समझदारी पनि भएको छ । समझदारीमा भनिएको छ, दुवै देशका जनताको चाहनाबमोजिम नयाँ अमेरिकी–उत्तर कोरियाली सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रतिबद्ध रहेको, दुवै देशले कोरियाली प्रायद्वीपमा दिगो र स्थायी शान्ति निर्माण गर्न आपसी प्रयासलाई एकताबद्ध तुल्याउने, सन् २०१८ को अप्रिल २७ तारिखमा भएको पाममुनजम घोषणाप्रति समर्थन जनाउँदै उत्तर कोरियाले कोरियाली प्रायद्वीपको पूर्ण परमाणु निःशस्त्रीकरणका दिशामा काम गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुका साथै दुवै देशले युद्धबन्दी र लडाइँका क्रममा बेपत्ता भएकाको अवशेष खोजी गर्ने र पहिचान भइसकेको पार्थिव अवशेषलाई सम्बन्धित देशमा तत्काल पठाउन प्रतिबद्धता जनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका र प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्रात्मक कोरियाले शान्ति र समृद्धिका लागि उत्तर कोरियालाई निःशस्त्रीकरण गर्ने सन्दर्भमा भएको विश्वको यो पछिल्लो प्रयास हो । उत्तर कोरियासँग अन्य समझदारीभन्दा निःशस्त्रीकरणको प्रक्रिया विशेष मह¤वको रहेको विश्वका नेताहरुको टिप्पणी छ । आशा राखौँ, उत्तर कोरियाले यसलाई इमानदारितापूर्वक परिपालना गर्नेछ र अमेरिका पनि आप्mनो वचनमा अडिग रहने छ । यदि यो परिपालना भयो भने सबैभन्दा खुशी शताब्दीयौँदेखि चखेवाचखेवीझैँ दुई देशमा बिछोडिएर बस्न बाध्य दुवै देशमा रहेका कोरियाली बन्धुबान्धवहरुलाई हुनेछ । किनकि, सम्बन्ध सुमधुर बन्दै गएमा उनीहरुले एकअर्कालाई भेट्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन् । अर्को खुशी पनि ती दुवै देशका नागरिकलाई नै मिल्नेछ, किन पनि भने सम्भावित युद्धको चपेटामा विश्वका हरेक नागरिक पर्दा हामी पनि पथ्र्यौँ नै, तर प्रत्यक्षरुपमा शिकार हुने त ती दुई देशका दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरु नै हुनेथिए । यसपछि अन्य छिमेकी देशसहित विश्व अहिलेको सम्भावित विनाशलीलाबाट जोगिएको छ । साँढेको जुधाइमा हामी बाच्छाहरु मिचिन्थ्यौँ र मकै पिस्दा घुन पनि पिसिहाल्छन् नि भन्ने उक्तिभित्र अभिशप्त बन्थ्यौँ । तर जे होस्, अहिलेलाई त्यसबाट जोगिएका छौँ हामी ।
युद्ध त कतार र साउदी अरेविया देशलाई समर्थन गर्ने देशहरुका बीच पनि हुन सक्छ । यो द्वन्द्व प्राकृतिकभन्दा पनि अमेरिकाद्वारा प्रायोजित देखिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले साउदी अरेविया आदि देशको भ्रमण गरेपछि आरम्भ भएको हो । मुस्लिमहरुलाई फुटाऊ र कमजोर बनाऊ, मिलेसम्म हतियार बेच र आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरिराख भन्ने रणनीतिअनुरुप नै यो प्रायोजित द्वन्द्व सुनियोजित थियो । साउदी अरेवियाले नाकाबन्दी पनि लाएपछि यसलाई खुकुलो तुल्याउन कतारले अमेरिकाबाट सयौँ करोड डलरमा शक्तिशाली एटम बम किन्यो । यसपछि साउदी अरेवियन देशहरुले कतारमाथिको नाकाबन्दी खुकुलो तुल्याए । भारत र पाकिस्तानबीचको तनाव दक्षिण कोरिया र उत्तरकोरियाको जस्तो होइन । यो एउटा निश्चित भूगोललाई लिएर भएको द्वन्द्व हो । यसमा पाकिस्तानले भनेजस्तो गरी भारतले जम्मू–काश्मीरका नागरिकलाई जनमतसङ्ग्रह गराउँदैन र दुवैका बीच लिनेदिने पनि हुँदैन । यसर्थ पनि यो जन्मसँगै पैदा भएको शत्रुता सहजै समाधान हुने सम्भावना क्षीण छ ।
अमेरिका आपूmलाई प्रजातान्त्रिक मुुलुक सम्झन्छ, तर ऊ आफैँ साम्राज्यवादी छ । कस्तो अचम्म ! आपूm पूर्णतः शक्तिशाली शस्त्र÷अस्त्रसज्जित हुनुपर्ने, अरु भए विश्वलाई खतरा हुने भन्दै उर्दी लाउने । संसारलाई आर्थिक, राजनीतिक, भौतिक, बौद्धिक, पारमाणविक आदि अस्त्रहरुका दृष्टिले पनि संसारका अरु देशहरुलाई नियन्त्रणमा राख्ने र आफ्नो हितअनुकूल चल्न बाध्य तुल्याउनैपर्ने ! कोरियाको शस्त्रीकरण अमेरिकाका निम्ति अप्ठेयारो ठाउँमा निक्लिएको पिलो हुनपुग्यो । आप्mनो सामथ्र्य खस्कँदै गरेको परिवेशमा चाइनाले गरेको विकास उसलाई पचेन । रसिया र भारतले गरेको प्रगति पनि उसका निम्ति निद्राहराम बनाउने अस्त्र बन्नपुग्यो । फलतः अहिले डोनाल्ड ट्रम्प चीन, युरोपियन मुलुकहरु र क्यानडासँग कर वृद्धि गर्दै छन् र विश्वबाट भने एक्लिरहेका छन् । व्यापारिक युद्ध भोलि पारमाणविक अस्त्रजन्य युद्धमा परिणत हुने हो कि भन्ने शंका पनि उब्जाइरहेको छ । यस स्थितिमा दुई देशले गरेको यो समझदारी कत्तिको टिकाउ बन्ने हो यसै भन्न सकिन्न ।
विश्वराजनीति पनि हामीले सोचेजस्तो सरल रेखामा नभई वक्ररेखामा हिँड्दोरहेछ । बाहिर जे बोलिन्छ र देखाइन्छ, त्यो सफेद भूmट हुने गर्दोरहेछ । यसैको परिणति हो, इराक र सद्दामको नियति । त्यो द्वन्द्वमा भलै कूर्दहरुमाथि थोरैधेरै विभेद गरे होलान् नै । उनले विपक्षीको आवाज मुखरित हुन दिएनन् होला पनि । झन्डै तीन दशकभन्दा बढी रजगज गर्दा भए पनि होलान्, केही आरोह–अवरोह पनि । तर, फाँसीकै तख्तामा चढाउने हैसियतका ती थिएनन् भन्ने खुल्दै गएको छ अहिले । त्यो बिलकुल पेट्रोलियम पदार्थसँगै जोडिएको थियो र छ । वस्तुतः अमेरिकाको आप्mनै अपार प्राकृतिक स्रोत छ, तर अहिले त्यसलाई दोहन गर्न चाहिरहेको छैन ऊ । अन्यत्रबाट पाउँदासम्म नचलाउने रणनीति बनाएको अमेरिकालाई सद्दाम हुसेनले तेल दिन चाहेनन् । यसकै साटो फेर्दै अनेकौँ बहानामा सिध्याएरै छोड्यो उसले, यसको इतिहास साक्षी छ । अफगानिस्तानमा पुरातनपन्थी कट्टर मुस्लिम तालिबानले शासन गरिरहेका थिए । अमेरिकाको व्यवहार मन नपराएका ओसामाविन लादेन र उनको संस्था त्यहीँबाट पालितपोषित थियो । जसले अमेरिकामा जहाज आक्रमण गराई दुई ठूला व्यापारिक भवन ध्वस्त गराइदिए । त्यसैको साटो फेर्न नै उसले लाखौँ अफगान नागरिकको ज्यान लियो ।
रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य अमेरिका
यद्यपि, लादेन मारिए र अफगानिस्तान सत्ताच्युत पनि भयो । तर, सदाका निमित नभई क्षणिक समयका लागिमात्र । न तालिबान सदाका निम्ति अस्तायो, न अल कायदा समाप्त भयो । बरू, अमेरिका स्वयं इराक र अफगान आक्रमणबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको छ । भारतको माओवादी विद्रोह त शोषण, गरिबी र विभेदविरूद्धको हो, त्यो आर्थिक तथा शैक्षिक विकाससँगै समाधानको दिशामा जानथालेको छ । अफ्रिकी देशहरुमा भएका विद्रोहहरु अहिलेसम्म अन्तरतहमै सीमित छन् । चीन, रसिया, उत्तर कोरिया र भारतजस्ता देशहरु उदाइरहेको परिप्रेक्ष्यमा अमेरिका पहिलेकै रजगज र मनोविज्ञानबाट अघिबढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । उसले अन्य देशको सम्पन्नतालाई पनि सहज र सौहार्दतापूर्वक लिनसकेमा नै विश्वले शान्ति, अमनचयन र समृद्धि प्राप्त गर्ने निश्चित छ ।